I-Kygo E7 / 1000 i-Kygo TWS yazo zonke izinhlobo zabasebenzisi [Buyekeza] | Izindaba zamagajethi
I-Kygo E7 / 1000 TWS's KyS yazo zonke izinhlobo zabasebenzisi [Buyekeza]
UMiguel Hernandez | | Ama-movie nochungechunge, General, Izibuyekezo
Esikhathini esithile esidlule sahlaziya ukuthi yikuphi ukuxhumana kwethu kokuqala nenkampani UKygo Life, uhlobo lukaDJ nomculi uKygo okusishiye simangazwe ikhwalithi nokuguquguquka kwalokho esikunikeze kona, sincoma ukuthi uhlaziye i- UKygo A11 / 800.
Kodwa-ke, kulokhu sigxila kumkhiqizo ohluke ngokuphelele, I-Kygo E7 / 1000, i-headphone ye-TWS enebhokisi layo lokushaja, thola ukuhlaziywa kwethu. Kuyo, njengenjwayelo, uzobona ngokujula ukuthi lo mkhiqizo usebenza kanjani futhi uma kuwufanele ngempela, ingabe uzowukhumbula?
Njengenjwayelo, ngithanda ukuthatha uhambo olufushane lwenkampani kuqala, ikakhulukazi lapho sisebenzelana nemikhiqizo engaziwa kangako. Siziphinda kulokhu okungenhla UKygo Life wumkhiqizo womculi noDJ Kygo, ifemu izinze eNorway Futhi inemikhiqizo eminingi kukhathalogi yayo, konke kugxile kokulalelwayo, umkhakha ophethwe ngugodfather wayo uKygo.
1 Idizayini nezinto zokwenziwa: Umehluko emakethe yesifaniso
3 Ukuzimela nezilungiselelo
4 Isipiliyoni somsebenzisi nekhwalithi yomsindo
Idizayini nezinto zokwenziwa: Umehluko emakethe yesifaniso
Into yokuqala engimangazile ngalezi zeKygo E7 / 1000 ngukuthi bakhetha ukwakheka okungafani nokunye. Umkhuba ojwayelekile ku-TWS ukufana ne-Apple's AirPods ngangokunokwenzeka kokubili ebhokisini nakulo mkhiqizo uqobo, noma kunjalo, uKygo Life ukhethe ukuhlukaniswa okucacile kuwo womabili amahedfoni nebhokisi lakhe lokushaja, bobabili benobuntu obenele futhi lokho uqaphele ngokushesha. Sinezindlebe ezindlebeni esingazisebenzisa ngezinsiza eziningi ezifana nezibopho noma amapayipi wokuhambisana ngokuya ngezidingo zethu ezithile. Kusukela kumzuzu wokuqala sibona ukuthi lezi Kygo E7 / 1000 zihlukile okungenani, futhi lokho kuzokwaziswa emakethe egcwele izinto ezifanayo.
Amabhangqa ama-3 ama-adapters endlebe: S, M, L
1 i-adaptha yegwebu
Amaphara amathathu endlebe: S, M, L
1 pair of hoops abicah
Intambo yokushaja ye-USB-C
Ukukhanya kwayo kuyamangaza, ibhokisi lokushaja elinezindlebe ngaphakathi lihlala cishe kuma-gramu angama-60. Ibhokisi nalo lihlangene impela, Ibunjwe njengesifuba esiyindilinga ngokuphelele (kunalokho esiyindilinga). Iqiniso ngukuthi ibukeka incane kunokubheka ukuyiphatha ephaketheni lakho, lapho ingahle ibe namandla kakhulu. Vele, ukwakheka kwayo kuyivumela ukuthi ishiywe kunoma iyiphi indawo ngaphandle kokwesaba. Khumbula lokho Zingathengwa zombili ezimhlophe nezimnyama. Zikhona ukwenza ngokukhululeka kakhulu ukuzivocavoca umzimba, Uma ukhetha kahle, izibopho zibamba ngokuphelele.
Siqala ngamahedfoni, bane- Umshayeli we-6mm ngakunye banikeza ukungacabangi kwe-1-6 ± 15% nemvamisa yokuphendula ephakathi kuka-20Hz no-20kHz, okuvame kakhulu kulolu hlobo lomkhiqizo. Mayelana nokuzwela, sifike ku-116 db. Kukho konke lokhu akusebenzisayo I-Bluetooth 5.0 kanye nohla lwemisebenzi ezungeze i-10m enezinto ezingaphezu kokuhlangana nathi. Ngalesi sikhathi asinayo i-aptX ne khetha indinganiso ye-AAC, ejwayelekile ikakhulukazi kumadivayisi we-iOS.
Amahedfoni ngamunye anemakrofoni yakhe futhi banikela ngazo zombili izingcingo zestiriyo (singaphendula izingcingo ezigqoke i-headphone eyodwa kuphela, zizimele) nokukhanselwa komsindo kuzo. Ukubhanqwa kwehedfoni yi- okuzenzakalelayo ngaphandle kwebhokisi futhi ziyacima lapho zibuyiselwa, kepha, siphuthelwa uhlelo lokuthola olumisa umculo lapho siwususa ezindlebeni zethu.Ukubhangqa kuyazenzakalela futhi kuyashesha, yize ngithanda ukusho ukuthi akuhambisani nohlelo lweKygo, okuthile okungimangazile kunikezwe ulwazi oluhle olunikezayo.
Asinayo imininingwane ethile ku-mAh yebhethri, esinakho yikho cishe amahora amahlanu wokudlala komculo ngamavolumu aphezulu ngama-headphone kanye namahora angama-24 esewonke uma sinamacala enziwe yibhokisi. Le yimininingwane osinikeze yona ekuhlaziyweni kwethu okungaba yinyanga. Ukushaja kwebhokisi kwenziwa kusetshenziswa ikhebula le-USB-C (elifakwe ebhokisini) futhi lokhu kubonakale kuyiphuzu lokuhlanganisa, kukhululekile futhi kubhejwa ngezinga elidumile namuhla.
Kubalulekile ukusho ukuthi ama-headphone anenkinobho ebonakalayo kulowo nalowo kubo ozimele. Ngalawa mahedfoni sizokwazi ukukhuphula futhi sehlise ivolumu ikakhulu, kepha futhi singadlula engomeni, sincenge umsizi wedivayisi yethu (Umsizi weGoogle noma uSiri) bese siphendula izingcingo ngemishini emifushane noma emide. Ngikuthola kukuxaka ukuthi bakhetha uhlelo lwenkinobho, kepha uma ngicabanga ukuthi ngenxa yezibopho cishe akunakwenzeka ukuthi ziwe, kungahle kube nengqondo ukugwema ukuthintwa okungahlosiwe.
Isipiliyoni somsebenzisi nekhwalithi yomsindo
Angamahedfoni ahambelana kakhulu cishe kuzo zonke izimo, esinakho Umjuluko we-IPX7 nokumelana namanzi ngakho-ke ziyakhonjiswa kwezemidlalo, ikakhulukazi uma sithatha isinqumo sokukhetha izibopho esikhundleni sendandatho yesilicone. Banomthamo ophakeme ngokwanele futhi banikela ngomsindo wekhwalithi ephezulu, njengoba kwenzeka ngeminye imikhiqizo yomkhiqizo, umsindo wekhwalithi ephezulu futhi onamandla kakhulu kunesilinganiso semikhiqizo yalesi sigaba. Ngakolunye uhlangothi, ngifuna nokusho ukuthi izingcingo ziphumelele, imakrofoni yesitiriyo iyabonakala futhi ukubiza nabo kuyintokozo.
Ngiyakhumbula ukuthi bakhethe uhlelo lwe inkinobho yomzimba Ku-earbud ngayinye, kanye nokuthi abanazo izinzwa ezimisa umculo uma uzikhipha, kungumkhiqizo osezingeni eliphezulu lapho ungalindela into efana nale. Into eyodwa ebengiyethemba ukuthi bezihambisana nohlelo lokusebenza lweKygo, kanti akunjalo.
Basebenzisa izinkinobho ze-multimedia ebonakalayo
Abanayo inzwa yokusondela
Awahambisani nohlelo lokusebenza lwe-Kygo
Nge-cons, sinamahedfoni amelana kakhulu, akhiwe kahle, aneBluetooth 5.0 futhi kuzwakala kahle, ngokuzwakalayo nangokucacile ngokwanele ukujabulela umculo, nokuzehlukanisa ngaphandle ngokwanele ukuze uhlale ugxile ngaphandle kwe-ANC.
Ikhwalithi yomsindo ephezulu namandla, njengeminye imikhiqizo yaseKygo
Amandla nezinto zekhwalithi, kanye nebhokisi elihlanganisiwe
Umbhobho omuhle wezingcingo
Induduzo kanye nokwenzeka kokwenza ezemidlalo nabo
Sibhekene nomkhiqizo wama-euro angu-149,99 ukuthi ungathenga kokubili kuwebhusayithi yayo esemthethweni naku-LOKHU I-Amazon LINK. Bangaba ithuluzi elithandekayo lokunikeza lo Khisimusi.
I-Kygo E7 / 1000 i-Kygo TWS yazo zonke izinhlobo zabasebenzisi
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » I-Kygo E7 / 1000 TWS's KyS yazo zonke izinhlobo zabasebenzisi [Buyekeza]
adrian guillermo sosa guevara kusho
Ngangihlanjululwa, ngilalela eyodwa ngesikhathi njengoba ngenza ukulalela bobabili. Usizo.
Phendula u-adrian guillermo sosa guevara
Amakhava ama-AirPods kuwebhusayithi ye-Apple
Ukubuyekezwa kweHohem iSteady Mobile + Gimbal